I-Studio Pannonac - I-Airbnb
Ifulethi liseduze neLake Pannonica, isikhungo somlando kanye nepaki yedolobha. Ibhikawozi nesuphamakethe kuphakathi kwe-100m. Ifulethi le-studio, elilungele abantu abangu-2, lihlinzeka ngekhishi elihlanganisiwe elihlomele ngokuphelele, igumbi lokugezela kanye nesiphephetha-moya. Indawo yokupaka engaphandle komgwaqo kanye negalaji langasese liyatholakala. Isikhumulo sezindiza siyimizuzu eyi-15 ukusuka ePannonica Suite. Isithuthi esizimele ngemoto singahlelwa ngamanani amakhulu ezivakashini lapho zifika futhi zihamba.
Leli fulethi elincane, elithokomele le-studio lifakwe zonke izinsiza ezibalulekile ezidingwa izivakashi zethu ukuze sibe nokuhlala okujabulisayo nokunethezekile.
Indawo lapho ifulethi litholakala khona ingeyendawo ekhanga kakhulu yaseTuzla, njengoba iseduze kakhulu nesikwele esikhulu kanye nePannonica Lake noma ipaki elungele umthamo wasekuseni wendawo eluhlaza. Imizuzu engu-2-3 uma uhamba ngezinyawo ungathola izindawo ezimbalwa ukuze ubambe okuthile ongakudla noma uphuze ikhofi, igrosa enkulu kanye nendawo yemakethe yezithelo nemifino emisha.
Siyatholakala nganoma imiphi imibuzo, ulwazi noma usizo oludingayo nganoma yisiphi isikhathi. Zizwe ukhululekile ukusithinta.